Luster Mineral: Imizekelo kunye neNkcukacha
I-Metallic Luster eGalena
Ifoto (c) 2007 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
I-Luster, iphinda ipelapress luster, yinto elula yinto eyinkimbinkimbi: indlela yokukhanya idibanisa kunye nomhlaba wamaminerali. Le galari ibonisa iintlobo eziphambili zobumnandi, ezivela kwi-metallic ukuba zibole.
Ndingazibiza ngokukrakra ukudibanisa (ukukhanya) kunye nokukhanya. Ngokutsho kwala ma parameters, nantsi indlela i-lusters eziqhelekileyo eza kuphuma ngayo, ukuvumela ukuhlukahluka:
I-Metallic: ukubonakalisa okuphezulu, opaque
I-Submetallic: ukubonakaliswa okuphakathi, opaque
UAdamantine: ukubonakaliswa okuphezulu, okucacileyo
I-Glassy: ukubonakaliswa okuphezulu, okubonakalayo okanye okudlulileyo
Ukuhlaziya: ukubonakaliswa okuphakathi, ukudlula
Umxhasi: ukubonakaliswa okuphakathi, ukudlula okanye opaque
I-Pearly: ukubonakaliswa okuphantsi, ukudlulisa okanye ukuphawula
Ukulahla: akukho ukubonakalisa, okwenziweyo
Ezinye izinto eziqhelekileyo ziquka i-greasy, silky, vitreous and earthy.
Akukho mida emiselweyo phakathi kwalaba badibanisi, kwaye imithombo eyahlukileyo ingahle ihlukanise ukukhanya ngeendlela ezahlukeneyo. Ukongezelela, elinye iqela leemaminerali linokuba neempempe ngaphakathi kwalo kunye nezilwanyana ezahlukeneyo. ULutter unobungakanani kunokuba lube nobungakanani.
Ehlelwe ngu-Brooks Mitchell
UGalena unobuncwane bokwenene bensimbi, kunye nobuso bonke obutsha njengesibuko. Jonga igalari yezetyela zetsimbi
I-Metallic Luster kwiGolide
IGold ine-luster metallic, icwecwe ebusweni obucocekileyo kwaye idonsa ngobuso obugqamile njengolu hlobo. Jonga igalari yezetyela zetsimbi
I-Metallic Luster kwi-Magnetite
I-Magnetite ine-luster metallic, icwecwe ebusweni obucocekileyo kwaye idonsa ngobuso obunene. Jonga igalari yezetyela zetsimbi
I-Metallic Luster e-Chalcopyrite
I-Chalcopyrin ine-luster metallic, nakuba i-sulfide yesinyithi kunokuba isinyithi. Jonga igalari yezetyela zetsimbi
05 ka 27
I-Metallic Luster kwiPyrite
I-Pyrite ine-lusterli okanye i-submetallic luster nakuba i-sulfide yesinyithi kunokuba isinyithi. Jonga igalari yezetyela zetsimbi
I-Submetallic Luster eHematite
I-Hematite ine-lusterlic luster kulo mzekelo, nangona ingaba yinto enzima. Jonga igalari yezetyela zetsimbi
Adamantine Luster kwiDamond
I-Diamond ibonisa ukukhanya kwe-adamantine ecacileyo (ngokugqithisa kakhulu, kwanomlilo), kodwa kuphela kubuso obucocekileyo bekristal okanye kwi-fracture surface. Lo mzekelo ulungele ukukhanya okuchazwe njenge-greasy.
08 ka 27
Adamantine Luster eRuby
I-Ruby kunye nezinye iindidi ze-corundum zingabonakalisa ukukhanya kwe-adamantine ngenxa yesikhokelo sayo esiphakamileyo.
Adamantine Luster eZircon
I-Zircon ine-lusantine ukhanyiso ngenxa yesaziso sayo esiphakamileyo sokukhanda, okwesibini kwidayimane kuphela.
Adamantine Luster kwi-Andradite Garnet
I-Andradite ingabonisa ukukhanya kwe-adamantine kwiimpawu eziphezulu, ezikhokelela kwigama layo lemveli yeDemantoid (i-diamond efana ne-garnet).
Adamantine Luster eCinnabar
I-Cinnabar ibonisa uluhlu lwezilwanyana ukusuka kwi-toxy ukuya kwi-submetallic, kodwa kule mzekelo ifuphi kakhulu kwi-adamantine.
I-Glassy okanye i-Vitreous Luster kwiQuartz
I-Quartz isetya umgangatho wesilayidi (i-vitreous) ekhanyayo, ngakumbi kwiinkristal ezicacileyo ezinje.
I-Glassy okanye i-Vitreous Luster e-Olivine
U-Olivine une-glare (i-vitreous) ekhanyayo efana neyaminerali.
I-Glassy okanye i-Vitreous Luster kwi-Topaz
I-Topaz ibonisa ukukhanya okukhenkce (i-vitreous) kulezi zikhuni ezifakwe kakuhle.
I-Glassy okanye i-Vitreous Luster eSelenite
I-selenite okanye i-gypsum ecacileyo ine-glare (i-vitreous) ekhanyayo, nangona ingazange iphuculwe njengamanye amaminerali. I-sheen, efaniswa nokukhanya kwenyanga, ibiza igama layo.
I-Glassy okanye i-Vitreous Luster e-Actinolite
I-Actinolite ine-glassy (vitreous) ekhanyayo, nangona iyakubonakala iphantsi okanye i-resinous okanye i-silky ukuba i-crystals yayo ilungile ngokwaneleyo.
I-Resinous Luster e-Amber
I-Amber yinto ebonakalayo ebonisa ukukhanya kwe-resinous. Eli gama ngokuqhelekileyo lisetyenziswe kumaminerali ombala ofudumele kunye nokungafihli.
I-Luster Resinous ku-Spessartine Garnet
I-Spessartine garnet inokubonisa igolide, i-soft sheen eyaziwa njenge-lusin luster.
I-Waxy Luster e-Chalcedony
Ifoto (c) 2007 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi ye-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
I-Chalcedony yindlela ye-quartz kunye neekristasi ezincinci. Apha, ngohlobo lwe- chert , lubonisa ukukhwa kwe-wax ejwayelekile.
I-Waxy Luster kwi-Variscite
I-Variscite i-phosphate amaminerali kunye nefuthe eliqulunqa kakuhle. Ukukhenkceka kwe-oxy ishicilelwe kwiimaminerali ezininzi ezisesekondari ezinamafutha amancinci.
Luster Pears ku Talc
I-Talc yaziwa kakuhle ngenxa yefuthe layo elibonakalayo, elivela kwiindawo zayo ezincinci kakhulu ezibandakanya ukukhanya okungena ngaphakathi.
I-Pearly Luster eMuscovite
I-Muscovite , njengamanye amaminerali e-mica, ithola i-luster yayo ebonakalayo ukusuka kwiindawo eziphantsi kakhulu ezingaphezulu komhlaba.
I-Dull okanye i-Earthy Luster e-Psilomelane
U-Psilomelane unobuncwane okanye obumhlaba obukrakra ngenxa yokuncinci kakhulu okanye ukungabikho kwamakristali kunye nokungabi naso.
I-Dull okanye i-Earthy Luster eCrysocolla
I-Chrysocolla ine-luster okanye i-lustry, enobumba obukrakra, ngenxa yeekristasi zayo ezincinci.
I-Glassy okanye i-Vitreous Luster -Aragonite
Ifoto (c) 2007 u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com
I-Aragonite inobumba obukhanyayo (i-vitreous) ebusweni obutsha okanye iikristali eziphezulu ezifana nalezi.
I-Glassy okanye i-Vitreous Luster - i-Calcite
I-Calcite ine-glassy (vitreous) ekhanyayo, nangona i-mineral epholile iphendulela i-duller nge-exposure.
27 kwi 27
I-Glassy okanye i-Vitreous Luster-Tourmaline
I-Tourmaline ine-glassy (vitreous) ekhanyayo, nangona i-specimen emnyama enjengale crystal ye-schostal ayikho into esiyicinga ngayo njengeglasi.
Yonke into malunga neGrey Size
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: glyco-, gluco-
Iimpawu zeMpawu neSigaba
Ukukhanya njani kwiMisebenzi yoMnyama emnyama
I-Mendelevium Facts - Element 101 okanye uMd
Ngaphambi kokuba Uthenge i-Magnifier
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweempahla eziqinileyo kunye neenzulu?
IiKlabhu zeMidlalo zeHlabathi eziphezulu kwiNew York City
Iintlola zeendiza zeentaka
I-Straddle Stretch Routine for Splits
Ulwimi lwaseJapan oluSisiseko isigama kunye neeFayile zoMculo
Iingcaphuno zokucamngca kwiiNgcwele
UYosefu - nguToliki weeNkolelo
Yintoni iSikole Sonyango Ngokunene?
Igalari yezithombe: ngaphakathi kwee-Studios zabaDlali
Iincwadi zokuBamba: I-Must-Read Literature ye-1920s
States kunye namaKapa
UJohn Quincy Adams: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
I-7-Up Edition Ford Mustang
Uluphi uhlobo olufanelekileyo?